आपूर्तिको घोषणा : नेपालचर्च डट कम NepalChurch.com
आपूर्तिको घोषणा, मत्ती ७:७-१२
हरेक मानिसले खाँचोको सामाना गर्नुपर्छ। मानिसलाई जन्मनुभन्दा अगाडि आमाको गर्भमा हुँदा नै धेरै प्रकारका आवश्यकताहरूले घेरिसकेकाहुन्छन्।
जब मानिस ठूलो हुन्छ, र जान्नेा हुन्छ तब पनि उसलाई थुप्रै कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ। ख्रीष्टियनहरूलाई पनि अरूलाई जस्तै भौतिक र आत्मिक दुवै कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले स्वर्गको राज्यमा आपूर्ति व्यवस्थापनको ग्यारेन्टि गरिएको छ।
स्वर्गको राज्यका नागरिकलाई आवश्यकता पर्दा, कहाँ जाने र के गर्ने? भन्नेय स्पष्ट निर्देशन प्रभु येशूले दिनुभएको छ।
हामीलाई खाँचो पर्दा हामी परमेश्वरकहाँ जानुपर्छ। त्यसपछि त्यसलाई प्राप्त गर्ने तरिकामा प्रार्थना गर्नुपर्छ।
यो प्रार्थना कसरी गर्नुपर्छ भनी प्रभु येशूले यस भन्दा अगाडिको खण्डमा सिकाउनु भएको छ।
यस खण्डमा यही प्रार्थनालाई आवश्यकता परिपूर्तिको हतियार कसरी बनाउने भनी प्रभुले सिकाउनु भएको छ।
आउनुहोस् मत्ती ७:७-१२ पद पढौं।
“माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, ढकढक्याओ त तिमीहरूका निम्ति उघारिनेछ। किनकि जसले माग्छ, त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ, त्यसले भेट्टाउँछ, जसले ढकढक्याउँछ, त्यसको निम्ति ढोका उघारिनेछ।” तिमीहरूमध्ये कुन मानिस होला जसको छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला? कि माछा माग्दा त्यसलाई साँप देला? यसकारण तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल चीज दिन जान्दछौ भने, स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले उहाँसित माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर असल चीज दिनुहुनेछ। मानिसहरूले तिमीहरूसँग जस्तो व्यवहार गरुन् भन्नेद तिमीहरू चाहन्छौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूसँग त्यस्तै व्यवहार गर, किनभने यही नै व्यवस्था र अगमवक्ताका शिक्षाको सारांश हो।”
यस खण्डमा भएका मूख्य कुराहरू निम्न छन् –
यी तीनवटै शब्दका कार्यले ‘प्रार्थनालाई’ नै इङ्गित गर्दछन्। प्रार्थनालाई अझ बढी जोड दिनको लागि प्रभुले यी कुरा भन्नु भएको छ।
स्वर्गको राज्यमा अनुग्रहका हकदार हुन हामी आफै आफैलाई नम्र तुल्याएर मगन्तेसम्म हुन सक्नुपर्छ तब मात्र हामीले आवश्यक कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौं।
माग्नु:- माग्नु एउटा साधारण कुरा हुन सक्छ। यो कति पटक पूरा नहुन सक्छ। तर भित्रैदेखी जोडसँग माग्यौं भने त्यो हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं।
खोज्नु:- खोज्नु, माग्नु भन्दा गहिरो कुरो हो। मानिसले सधैँ बहुमूल्य कुरा मात्रै खोज्छ। मूल्यहीन कुरा खोजी गरिँदैन त्यसैले खोजेर हामीले आफूलाई आवश्यक भएको कुराको महत्त्वलाई स्पष्ट पार्छौँ।
घचघच्याउनु:- मगन्ते तपाईंको गेटमा आएर माग्न सक्छ। उ अति साहसी रहेछ भने गेट भित्र प्रवेश गर्न सक्छ। तर ढोकै घचघचाउने उसलाई अधिकार हुँदैन। तपाईंको आफन्त वा मित्रले मात्र तपाईंको ढोका ढकढकाएर तपाईंसँग माग्न सक्छ।
परमेश्वर हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले माग्न सक्छौं। अझै माग्न सक्छौ। खोज्न सक्छौं र घचघचाएर भित्र प्रवेश गर्न सक्छौं र आफूलाई आवश्यक कुरा प्राप्त गर्न सक्छौं।
माग्नु, खोज्नु र घचघचाउनु एउटा संघर्ष नै हो। मानिसले परमेश्वरसँग गर्ने संघर्ष। यो संघर्ष कहिल्यै खेर जाँदैन, परमेश्वरले यसको कदर गर्नुहुन्छ।
माग – दिइनेछ, फिर्ता गर्नु पर्दैन
खोज – भेट्टाउने छौ, तिम्रै लागि हो
घचघच्याउ – खोलीनेछ, भित्र पस तिम्रै घर हो
आवश्यकता पर्ने सबैले माग्न सकिन्छ। धनी, गरीब, साना, ठूला, शिक्षित अशिक्षित सबैले। परमेश्वर पक्षपाती हुनुहुन्नक।
यो खण्डमा परमेश्वरीय सिद्धान्त सिकाउन एउटा मानवीय उदाहरण प्रयोग गरिएको छ।
कुनै बाबुले आफ्नो छोरा/छोरीलाई रोटी माग्दा ढुङ्गा दिंदैन, माछा माग्दा साँप दिंदैन। दुष्ट स्वभाव भएको मानिसले त आफ्ना सन्तानलाई असल थोक दिन जान्दछन् भने असल दयालु परमेश्वरले झन् बढी दिनुहुन्छ।
लूका ११:१३ पढौं।
तिमीहरू दुष्ट भईकन आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल थोकहरू दिन जान्दछौ भने, तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले उहाँसँग माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ।
यो पदअनुसार त परमेश्वरले हामीलाई भौतिक कुराहरू मात्र होइन आत्मिक पनि दिनुहुन्छ।
हामीलाई आवश्यक पर्ने हरेक कुरा हामी परमेश्वरसँग माग्न सक्छौं। तर परमेश्वरसँग सम्बन्धित हुन हामी पवित्र हुनुपर्छ। परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ। उहाँले न्याय मन पराउनुहुन्छ। अन्याय, अत्याचारको परमेश्वरले सधैँ विरोध गर्नुहुन्छ। यदि हामी परमेश्वरको ढोका घचघच्याएर परमेश्वरको घरभित्र प्रवेश गर्ने हो भने हामीले पनि मानिसहरू प्रति परमेश्वरले चाहनु भए जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ।
‘आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर।’
यही नै व्यवस्थाको सार हो। यसैमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। हामीलाई परमेश्वरको समीपमा लान यो व्यवस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ।
स्वर्गको राज्यमा अभाव हुँदैन। सबै आवश्यकता पूर्ति हुन्छन्।
« समाजप्रति मण्डलीको दायित्व
69. Careful planing »